Madaxda DKMG, Galmudug & Ximan & Xeeb oo ka hadley colaada gobolka Mudug(Dhageyso) – SBC
Madaxda DKMG, Galmudug & Ximan & Xeeb oo ka hadley colaada gobolka Mudug(Dhageyso)
Posted by editor on Julaay 3, 2011 Comments
Waxaa soo baxaya baaqyo & hadalo kala duwan oo ku jihaysan dagaalada ka aloosan deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug oo dagaalo ba’an maanta ku dhexmareen beelo ka soo kala jeeda maamulada Galmudug & Ximan & Xeeb, dagaaladaasi oo dhimasho & dhaawac badan dhaliyey.
Madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa’id ku qabtey magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ugu baaqay beelaha walaalaha ee dagaalkaasi uu dhexmarayo inay si deg deg ah colaada u joojiyaan, isla markaana ku badalaan wadaxaajood & wadahadal oo laga gudbo dhiiga daadanaya.
Sheekh Shariif wuxuu sheegay in dagaaladaasi ay yihiin kuwa aan loo baahneyn xiligan oo dalku uu ku sugan yahay marxad abaaro & dagaalo ay wadaan Al-Shabaab & Al-Qaacida, waxaana uu sheegay in si deg deg ah colaadaasi loo jiiyo. Player-ka hoose ka dhageyso shirka jaraa’id ee Sheekh Shariif) Sheekh Shariif oo ka hadlaya colaada Mudug
Dhinaca kale Madaxweynaha maamulka Galmudug Maxamed Axmed Caalin ayaa dagaalkii ka dhacay maanta deegaanka Dhagtuur wuxuu ugu baaqay dhinacyada ku lugta leh inay si deg deg ah u jooyiyaan, isagoo farta ku fiiqay in dagaalkaasi ay ka dambeeyaan sida uu sheegay xubno ka tirsan dawlada KMG oo aanu sheegin magacyadooda.
Caalin wuxuu carabka ku adkeeyey in colaadaasi ay huriyaan kooxo uu ku macneeyey inay leeyihiin caqiido diimeed oo aanu si buuxda u sheegin nooca ay tahay caqiiqadaasi.
Geestiisana Madaxweynaha maamulka Ximan & Xeeb Maxamed Aadan Tiicey oo maanta magaalada Muqdisho socdaal ku tagey wuxuu ka hadley dagaalada ka socda gobolka Mudug, waxaana uu ugu baaqay beelaha dagaalamaya inay si deg deg ah colaada u joojiyaan, waxaana uu sheegay in uu kala hadley madaxweynaha Galmudug sidii loo joojin lahaa colaadaasi.